असार १९, २०७५
बाढी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। पृथ्वीको भू- परिधीमा रहने पानीको सतह (जस्तै नदी नाला, ताल तलैया, समुन्द्र, ढल पाइप, भल निकास) बाट जमीनको सुक्खा क्षेत्र जलमग्न हुनुलाई बाढी भनिन्छ। हामीले बाढीलाई पूर्णत रोक्न त सक्दैनौं तर त्यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सक्छौंं।
नेपाल–अष्ट्रेलिया बिजनेस फोरमको औचित्य
मेलबर्नमा केही दिनअघि नेपालमा अष्ट्रेलियाका ब्यवसायीहरुको लगानी बढाउने उद्देश्य राखेर एउटा कार्यक्रमको आयोजना भयो । कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा अहिले देखिएको लगानीका अवसरहरु, देशमा भएका परिवर्तनहरु र नियम कानुनका बारेमा जानकारी थियो । कार्यक्रमपछि भने लक्षित लगानीकर्ता वा ब्यवसायीहरु समक्ष प्रत्यक्ष सन्देश पुऱ्याउन कति सकियो त भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
प्रदर्शनको सत्ता र सत्ताको प्रदर्शन
साहित्य लेखेबापत जेल जाने केन्याका प्रख्यात साहित्यकार हुन्, न्गुगी वा थ्योंगो । ‘पेटल्स अफ ब्लड’ र ‘आई विल म्यारी ह्वेन आई वान्ट’ उपन्यास लेखनको निहुँमा उनलाई सन् १९७७ मा जेल हालियो । उनीमाथि सरकार विरोधी साहित्य लेखेको आरोप लगाइयो ।
सेनाको व्यवसाय मोह
हालै भरतपुरस्थित डबलीमा ‘सोचेको लोकतन्त्र, भोगेको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा छलफल भयो । सहभागी थिए, कांग्रेस नेता गगन थापा । डेढ घन्टा लामो छलफल र खुला अन्तरक्रियापछि मैले थापालाई अन्तिम प्रश्न सोधेँ, २०६३ सालतिर सेनाको लोकतान्त्रीकरण शब्द नेताहरूको मुखमै झुन्डिएको थियो ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने जुक्ति
समृद्धिको प्रमुख पक्ष आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक नीतिदेखि नै पुनरावलोकन र सामयिक परिमार्जन जरुरी छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम नलाग्ने संस्थाहरू बन्द गर्ने र काम गर्नसक्ने संस्थाहरू खोल्दै जाने घोषणा गर्नुभएको छ ।
कीटनाशक विषादीको असर
डा. राकेश घिमिरे
बालीनालीमा लाग्ने रोग, किरा कृषकहरूका लागि मुख्य समस्या बन्दै आएको छ । बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र खेतीयोग्य जमिनलाई अन्य प्रयोजनमा बढाउँदै जाँदा खाद्य सुरक्षाका लागि किसानहरू आधुनिक कृषितर्फ लागेका छन् ।
उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । पहिले शिक्षा मन्त्रालयले यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए पनि त्यसमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी सुरु भएपछि परीक्षण गरेर लागू गर्ने बताइएको छ । परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा ११ र १२ मा गणितको अनिवार्यतालाई ‘जीवन उपयोगी शिक्षा’ले विस्थापन गरेको छ ।
संख्याको तराजुमा शरणार्थी
अढाई दशकदेखि नेपालमा आश्रित निर्वासित भूटानी समस्या नब्बे प्रतिशत समाधान भएको नारा दिइरहँदा विविध अवरोधबाट पुन:स्थापन रोकिएका, स्वदेश फर्कन लालायित र शरणार्थी दर्तामा ठगिनेहरूको शिविर बसाई भयावह बन्दै गएको छ ।
कमजोर छैनन् अब फूलहरू
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अधिकांश आफन्त तथा परिचितसँग एकै प्रकारको सवाल–जवाफ गर्दै आइरहेकी छु– ‘छोराछोरी कति छन् ?’ ‘एउटा ।’ ‘छोरा कि छोरी ?’ ‘छोरी ।’ ‘ए ! अनि अर्को नजन्माउने ? छोरा एउटा त चाहिन्छ नि !’ ‘हामी यसैमा सन्तुष्ट छौँ ।’ ‘त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र ? एउटै सन्तान त्यो पनि छोरी !
प्लास्टिकमुक्त सहर कहिले ?
‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल पारौं, पुन: प्रयोग गर्न नसके बहिष्कार गरौं ।’ यस नारासहित अन्यत्रझैं विराटनगर महानगरपालिकाको अगुवाइमा साताव्यापी कार्यक्रम भयो । दिवसको पहिलो दिन वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न आयोजकहरूले विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई बीसवटा साइकिल प्रदान गरे भने प्लाष्टिकको झोलाको साटो कपडाको झोला प्रयोग गरुन् भनेर कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई ३ सयजति कपडाका झोला पनि वितरण गरियो ।